ANDAPA : Tra-tehaka ny rongony 60kg, nadoboka am-ponja ireo tompon’antoka
Manao tohivakana ny fahatrarana ireo tambajotra mpivarotra sy mpifoka rongony tato ho ato. 19 juin 2019
Araka ny loharanom-baovao voaray avy any Andapa dia tra-tehaky ny Zandary avy ao amin’ny “Poste avancé” GN Ambodiangezoka Andapa ny jiolahy raindahiny atao hoe “Manantsoa” sy ny mpiray tsikombakomba taminy. Tamin’ny fotoana nahatrarana azy ireo dia nahitana rongony efatra gony milanja 60 kilao tany amin’izy ireo, ny alin’ny 12 hifoha 13 jona 2019 lasa.
Tamin’ny fanadihadiana natao azy ireo no nahafantarana fa avy any amin’ny Distrikan’i Bealanana ireo zava-mahadomelina no saika haparitaka tao Andapa. Avy hatrany dia natolotra ny fampanoavana ny 17 jona ny raharaha ka naiditra am-ponja vonjimaika ny tompony sy ny mpamily fiara, raha nodorana kosa ireo zava-mahadomelina tratra. Manentana hatrany ny Zandarimaria mba hanome vaovao hamongorana ity loza mitatao amin’ny fiarahamonina ity.
Iaraha-mahalala mantsy fa toerana maro samihafa manerana ny nosy no efa nahatrarana rongony naparitaka hatramin’ny fiandohan’ny taona 2019 ity. Hentitra ny mpitandro filaminana amin’ny fiadiana izany.